SERENE CONDOMINIUM (Myanmar Business Investment Group Co., Ltd/ Corporate Zware Group Co., Ltd.) | iMyanmarHouse.com
9400 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ အမှတ်( ၆ )ရပ်ကွက်၊ ဟံသာဝတီ( ၂၂ )လမ်း၊ ဗဟိုဈေးမီးပွိုင့်အနီး ဝေဇန္တာလမ်းမ၏ ကျောခြင်းကပ် တွင်တည်ရှိသော SERENE CONDOMINIUM သည် အဆောက်အဦးအား Pile Foundation System ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသည့်အဆောက်အဦး ဖြစ်စေရန်အတွက် တည်ဆောက်ရေးအပိုင်းအား Project Management Team ငှားရမ်းတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
SERENE CONDOMINIUM PROJECT အား ကျွမ်းကျင်ဗိသုကာပညာရှင် များ၏ ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံ နှင့်အရည်အချင်းတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင်တိတ်ဆိတ်ခြင်း ရှုခင်းကောင်းမွန်ခြင်း အလင်းရောင်နှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ခြင်း စသည်တို့ကို အခြေခံလျှက် ပုံစံဒီဇိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်သည့်နေရာဖြစ်သည့်အပြင် ဈေးဝယ် Centerများ ၊ Highway Bus Terminal၊ Hospital များ၏ ဝန်းကျင်တွင် တည်ရှိသဖြင့် စိတ်ချမ်းသာမှုရရှိစေမှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် SERENE CONDOMINIUM ၏ မျက်နှာခြင်းဆိုင်တွင် လူနေအိမ်များ မရှိသောကြောင့် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်မှုတို့ ပေးစွမ်းနိုင်မည့် နေရာလေးတစ်ခုဟု ပြောပြချင်ပါသည်။ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး သေသပ်လှပသောဒီဇိုင်း နိုင်ငံတကာအဆင့်မီလူနေမှုစနစ်များ ပါဝင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် SERENE CONDOMINIUM သည် လူကြီးမင်းတို့ မိသားစုအား အေးချမ်းခေတ်မီသည့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းတခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမည့် CONDOMINIUM ဟု တင်စားချင်ပါသည်။
"SERENE" ဆိုသည့် စာသားလေး၏အဓိပ္ပါယ်မှာ "ကြည်လင်အေးငြိမ်းသော တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော" ဖြစ်သောကြောင့် အဓိပ္ပါယ်များနှင့် ပြည့်စုံသည့်နေရာလေးမှာနေထိုင်ရင်း လူကြီးမင်းတို့၏မိသားစုလေး ဖြတ်သန်းသင့်ပါသည်ဟု အကြံဉာဏ်ကောင်းတစ်ခုပေးအပ်ချင်ပါသည်။
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း Quality Control အမြဲရှိနေပြီး စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံသော သံချောင်းများ အသင့်ဖျော်စပ်ထားပြီးသော ကွန်ကရစ်များကို အသုံးပြုထားသဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏မိသားစု လုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်သည့် CONDOMINIUM တစ်လုံး ဟုတင်စားချင်ပါသည်။
အဆောက်အဦးအတွင်း FACILITIES များမှာ CONDOMINIUM တစ်လုံးတွင် ပါဝင်ရမည့်အတိုင်း ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါသည်။ မြေအောက်ထပ်တွင် ကားရပ်နားရန်သီးသန့်ဖြစ်ပြီး နေထိုင်သူများမှ တစ်ခန်းလျှင်ကားတစ်စီးနှုန်းဖြင့် ထားရှိနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်လှေခါးသည်မြေအောက်ထပ်အထိ ထားရှိပေးထားသဖြင့် အဆင်ပြေမှုများစွာဖြစ်စေပါသည်။ မြေညီထပ်တွင် CONDOMINIUM ၌နေထိုင်သူများအသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်လျှက်
SPORT & HEALTH CORNER
WATER GARDEN LOUNGE & BBQ CORNER တို့ကို ထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားပါသဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ မိသားစုအားလပ်ချိန်လေးများအား ကွန်ဒိုအတွင်းမှာပင် စိတ်တိုင်းကျ အနားယူအပန်းဖြေနိုင်သည့်အပြင် လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုလည်း မြှင့်တင်ထားပါသည်။
လျှပ်စစ်မီးနှင့်ပတ်သက်၍ 400 KVA ရှိ ကိုယ်ပိုင် Transformer နှင့် ကိုယ်ပိုင် Power Generator တစ်လုံး စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
အချိန်ပြည့်ရေသုံးစွဲ နိုင်ရန်အတွက် Underground Water Tank နှင့် Overhead Tank တို့ထားရှိပါသည်။
CONDOMINIUM တွင် နေထိုင်ကြသူများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် လူ(၆)ယောက်စီး ဓာတ်လှေခါး(၂)စီး တပ်ဆင်ပေးထားသဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာမှုများစွာရနိုင်ပါသည်။
Security ပိုင်းအနေဖြင့် (၂၄) နာရီအချိန်ပြည့်လုံခြုံရေးစနစ် Fire Alarm And Fighting System၊ Security Door Card System စီမံကွပ်ကဲမည့်အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့တို့ထားရှိပါသည်။
၎င်းအပြင် SERENE Condominium တွင်နေထိုင်ကြသူများ၏ ရန်ကုန်မြို့မြင်ကွင်းကို နံနက်ပိုင်း ညနေပိုင်း အချိန်တိုင်းခံစားကြည့်ရှု့နိုင်ရန် Penthouse ဧရိယာအား နေထိုင်သူများအားလုံး အသုံးပြုခွင့်ရရှိခြင်းသည် ရန်ကုန်မြို့ Condominium များအားလုံးထဲမှ SERENE Condominium သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။
6 Quarter , Han Thar Waddy (22) Street , South Okkalapa Township, Yangon.
Gamone Pwint (Kabar Aye )
Inya Kanbaung (Kabar Aye Bagoda Road)
Myanmar Business Investment Group Co., Ltd/ Corporate Zware Group Co., Ltd.
No. 440, Waizayantar Road, South Okkala Township, Yangon.